Kuzoxoxwa ngekusasa likaCoetzee kwiDowns
URIVALDO Coetzee ogijima kwiMamelodi Sundowns unesifiso sokuqhubeka nokuhlala kulabo mpetha beligi Isithombe: BACKPAGEPIX
KUZODINGIDWA ngekusasa likaRivaldo Coetzee, ongomunye wabadlali abasemqoka kwiMamelodi Sundowns, ephezu komkhankaso wokuvikela isicoco seDStv Premiership.
Isolezwe litshelwe nguMike Makaab ophethe izindaba zalo mdlali ngaphansi kweProSport International. UCoetzee ufike kumaBrazilians esaqeqeshwa nguPitso “Jingles” Mosimane ngesizini ka-2017/2018. esuka kwi-Ajax Cape Town.
Wasayina inkontileka yeminyaka emine enombandela wokuyilula ngonyaka owodwa. Inkontileka yakhe neSundowns izophela ngoJuni. UCoeztee ungomunye wabadlali abaqopha umlando kuleli ngokudlalela iBafana Bafana eneminyaka engu-17 ngo-2014, ngaphansi kwesandla sika-Ephraim “Shakes” Mashaba owayengumqeqeshi ngaleso sikhathi.
UMakaab uthe balindele ukuhlangana nezikhulu zamaBrazilians, ngenhloso yokudingida ngekusasa likaCoetzee. Uthe nakuba inkontileka kaCoetzee inombandela wokuyivuselela ngonyaka owodwa kodwa bafisa ukuthi kuphindwe kwengezwe ngeminye iminyaka emibili.
“Ngingakudalula ukuthi singabaphathi bakaCoeztee, khona maduze nje sizokuba nomhlangano nezikhulu zeSundowns ngenhloso yokudingida ngodaba lwenkontileka entsha. Isifiso sethu esikhulu wukuthi yelulwe ngeminyaka emibili. Umdlali wethu usevezile ukuthi usafuna ukuqhubeka nokudlala kwiSundowns, kwazise usaphatheke kahle selokhu afika kuyona ngo-2017. Lokhu kufakazelwa wukunqoba nayo izicoco, yingakho nje thina singabaphathi sibone kungcono ukuthi izingxoxo mayelana nenkontileka entsha zisheshe ziqale. Ngiyethemba ukuthi umhlangano esizokuba nawo nabaphathi beSundowns, uzothela izithelo ezinhle ekusaseni lo mdlali,” kusho uMakaab.
Phambilini uCoetzee ubedlala emuva, wafika kumaBrazilians wadlaliswa enkabeni yenkundla nguMosimane. Kumanje ubanga ijezi nabadlali noHlompho “Gonzalez” Kekana ongukaputeni, u-Andile “Mhlekazi” Jali, uMothobi Mvala noTiyani “Sugar” Mabunda.
Ngaphandle kukaCoetzee, abanye abadlali abaphelelwa yizinkontileka neDowns ngoJuni, kubalwa uThemba “Mshishi” Zwane, uLyle Lakay, uSoumahoro Bangaly, uReyaad Pieterse, uMabunda, uJali, uTebogo Langerman noLebohang Maboe.